Akụkọ - Ọrụ nyocha na-arụ ọrụ bara uru
INTECH nwere ahụmịhe dị ukwuu na injinia na imepụta ihe, nke mere ndị ahịa ji abịakwute anyị mgbe ha na-achọ ihe ngwọta pụrụ iche maka mkpa nnyefe ha. Site n'ike mmụọ nsọ rue mmata, anyị ga - arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị otu gị iji nye nkwado injinia ọkachamara na usoro nhazi niile. Ọrụ anyị na-arụ n'ime ụlọ na SolidWorks CAD sọftụwia na-enye anyị nkwado injinia na ikike iji nye ọtụtụ ọrụ injinia gia. Ọrụ ndị a gụnyere:
Inyocha injinia nwere ike ịbụ usoro bara uru iji dozie ọtụtụ nsogbu imepụta gia. Enwere ike iji omume a chọpụta geometry gia nke ochie, ihe ochie ga - eji dochie ya, ma ọ bụ mepụta gia mgbe eserese mbụ adịghị. Usoro nke injinia agbara gụnyere ịkọwapụta gia ma ọ bụ nzukọ iji tụlee ma nyochaa ya. N'iji ngwa nlele na nyocha dị elu, ndị ọrụ injinia anyị nwere ahụmahụ na-eji usoro a iji chọpụta geometry gia nke gia gị. Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịmepụta otu nke mbụ, ma jikwaa nrụpụta zuru ezu nke gia gị.
Imewe maka Nrụpụta ihe
N'ihe banyere imepụta nnukwu ihe, ịkpụzi injinia na imepụta ihe dị oke mkpa. Nzube maka Nrụpụta bụ usoro imepụta ma ọ bụ ngwaahịa injinịa nke mere na ọ dị mfe nrụpụta. Usoro a na - enye ohere ịchọpụta nsogbu ndị nwere ike ịmalite n'isi mbido usoro, nke bụ oge pere mpe iji dozie ha. Maka imepụta gia, a ga-etinye nlezianya tụlee geometry gia, ike, ihe eji eme ihe, nhazi na ndị ọzọ. INTECH nwere ahụmịhe zuru oke na nhazi gia maka imepụta ihe.
Kama ịmalite site na ncha, INTECH na-enye gị ike ịmegharị ihe ndị ọzọ - ọbụlagodi na anyị emepụtaghị ihe mbụ. Ma gị Kwadoro chọrọ naanị obere ndozi, ma ọ bụ a zuru ezu redesign, anyị engineering na mmepụta ìgwè ga-arụ ọrụ gị iji melite gia mma.
Anyị enyerela imirikiti ndị ahịa aka ị mepụta ihe ha chọrọ.